Global Voices teny Malagasy » Mba hanomezana hery ireo olona ‘trans’: ny fomba nataon’ny Salvadoariàna iray mpanakanto mba hanomezana aina vao ny teny iray azo lazaina ho efa saika fongana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Mey 2021 4:57 GMT 1	 · Mpanoratra Eddie Galdamez Nandika avylavitra
Sokajy: El Salvador, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Teratany, Vehivavy sy Miralenta, Rising Voices
Voadin'ny asa ataon'i Petrona Xemi Tapepechul ny hampitambatra vondrompiarahamonina roa atao anjorom-bàla: ireo mpiteny ny fiteny Nawat sy ny olona ‘trans’ (nanova taovam-pananahana). Amin'ny alàlan'ny asa feno famoronana ataony amin'ny maha-vehivavy teratany nanova taovam-pananahana azy, manome voninahitra ny lovany izy amin'ny fampidirana ny fitenin-dreniny, Nawat,  efa andalam-panjavonana, ho any anatin'ireo anjara fiakarana an-tsehatra artistika samihafa lalaoviny, tantaniny na soratany.
Nawat, fiteny iray an'ny foko Nahuatl, izay mivelatra manomboka ao Meksika hatrany Costa Rica, dia tena tandindonim-panjavonana miaraka amin'ireo olona vitsy an-jatony mampiasa azy. Efa zokiolona vazimba teratany  vitsy monina any andrefan'i El Salvadaoro sisa izao no tena mampiasa ilay fiteny.
Namoy ampahany goavana tamin'ireo olona tao anatiny ny Nahuat na Nawat, noho ny fandripahana foko  nitranga nandritra ny fitondrana jadon'ny tafika fony Maximiliano Hernández Martínez tamin'ny 1932 — 25.000 hatramin'ny 30.000 ireo tantsaha sy vazimba teratany natao vonomoka tamin'izany taona izany.
Ankehitriny, misy hetsika iray ho fanomezana aina vao  ny Nawat eny anivon'ny tanora, izay misy an'i Xemi rahateo.
Taorian'ny nandaozany an'i “Kuskatan” toerana nahaterahany (El Salvador amin'ny fiteny Nawat), lasa mpikatroka sy mpitarika ao anatin'ny vondrompiarahamonin'ireo olona nanova taova ao Washington D.C. i Xemi. Niofana tao amin'ny National Conservatory of Dramatic Arts  izy, ary nilalao tanatina fiakarana an-tsehatra marobe tao Washington, isan'ireny ny nilalaovany ireo tantaran'ny Angel Rose Artist Collective , tarika iray noforoniny tamin'ny 2015.
“Ny hoe fanahy roa dia entina milaza olona iray manondro ny tenany ho sady manana fanahin-dahy no manana fanahim-bavy ihany koa, ary ampiasain'ny vazimba teratany sasany hamaritan-dry zareo ny maripamantarana ara-pananahana hisy azy, ny hoe lahy sa vavy, ary/na ny maripamantarana ara-pinoana,” araka ny  ambaran'ny fikambanana kanadiàna Re:searching for LGBTQ Health. Voafaokany  ao daholo ireo maripamantarana masina sy ara-tantara efa hatrany amin'ny taonjato maro lasa tany aloha, ary mety hahitàna ihany koa ny maripamantarana an'ireo LGBTQ, saingy tsy voafetra ho hatreo amin'ireo ihany.
Tany am-piandohana, nantsoina hoe “Nelwat Ishkamewe” ny tarika, izay midika hoe “fàka vazimba teratany”. Novain'ilay  tarika ny anarany ho fikambanana Artista Angel Rose mba hanomezany voninahitra an'i Angel Rose Garcia, vehivavy iray ‘trans’ 21 taona namoy ny ainy tamin'ny Desambra 2019.
Mamorona lalao an-tsehatra andraisan'ireo artista Nawat sy ‘Trans’ ny Fikambanana The Angel Rose. Roa tamin'ireo fiakarana an-tsehatra roa farany nontontosain'ny fikambanana ny Siwayul (Fon'ny Womxn iray ) sy ny The Cosmic Twins . Rehefa nifandimby ny taona, niforonon'ny fikambanana ireo lalao an-tsehatra ho an'ny vondrompiarahamonina teratany ‘trans’, isan'izany ilay tantara atao amin'ny fiteny telo antsoina hoe SIJSIWAYULU, izay midika hoe “Vehivavy Trans.” hoy i Xemi :
Tamin'ny 2020, najoron'ny Fikambanana Angel Rose ny sekoly virtoaly ho an'ny fiteny Nawat , tanjona amin'izany ny hitahirizana ilay fitenim-bazimba teratany izay efa toy ny nanjavona.
Ireo kilasy fampianarana fiteny dia ho an'ireo olona ‘trans’ sy olona cisgender  izay manohana ny vondrompiarahamonina ‘trans’. Anaran'ny sekoly ny hoe Tamachtiluyan Shuchikisa An Ne Nawat, izay midika hoe “Sekoly Iroboroboan'ny Nawat amin'izao fotoana izao,”.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/05/07/152104/
 tena tandindonim-panjavonana : http://www.endangeredlanguages.com/lang/ppl
 vazimba teratany: https://www.refworld.org/docid/4954ce3623.html
 fandripahana foko: https://en.wikipedia.org/wiki/La_Matanza
 fanomezana aina vao: https://globalvoices.org/2017/08/13/tata-genaro-ramirez-the-farmer-who-revived-the-nahuat-language-in-el-salvador/
 araka ny : https://lgbtqhealth.ca/community/two-spirit.php
 Fon'ny Womxn iray: https://www.angelrosearts.org/siwayul-heart-of-a-womxn
 sekoly virtoaly ho an'ny fiteny Nawat: https://www.angelrosearts.org/tamachtiluyan